Maimaim-poana ny hazo fijaliana-sehatra video conferencing amin’ny maro ny mpandray anjara
Hahazo ny telefaonina maro maimaim-POANA sy hankafy narahi-antso sy hafatra.
Miasa ao amin’ny fitsipika misy navigateur, amin’ny indray mipi-maso ny fidirana ho any amin’ny solosaina, ary tsy mitaky fametrahana
Vondrona lahatsary amin’ny chat ho an’ny IPhone, IPod, IPad, sy ny hafa finday lahatsary sy feo ireo mpandray anjara
Dia manolotra isan-karazany ny hafatra asa azo ho an’ny IPhone, iPod touch sy voafafa.
Handefa sary, horonan-tsary, sary, feo sy lahatsary hafatra ho ny namany
Azonao atao aza ny mandefa ny toerana.
Antso»Live Chat», lahatsary-antso, vondrona miantso anatin’izany vondrona video antso sy ny vondrona firesahana amin’ny hafatra rehetra maimaim-POANA. Voampanga amin’ny ambany ny tahan’ny sariaka antso ihany koa ny finday. Azonao atao ny mijery mangatsiatsiaka raki-tsary na misintona fampiharana, mahazo maimaim-poana minitra ho an’ny mivoaka antso.
«Ny lahatsary amin’ny Chat room»ho an’ny IPhone, IPod sy ny IPad dia AFAKA maka sy ny asa ao amin’ny tambajotra,»fifandraisana Finday», ary Wi-Fi.»Ny lahatsary amin’ny Chat room»azo ampiasaina koa ao an-trano amin’ny alalan’ny navigateur amin’ny PC na IPhone.
Navigateur fidirana tsy mitaky na inona na inona fanampiny fametrahana
Amin’izao fotoana izao izany dia ny hany fampiharana finday izay manohana ny vondrona video miantso ny IPhone miaraka amin’ny fahaiza- mpandray anjara sy ny teny fidirana ho kokoa ireo mpandray anjara.
Mahazo nahazoan-dalana mba hahazoana ny finday maro sy hiverina ny IPod na IPad an-telefaonina amin’ny fiara mpiantso ID.
Ny iray fotsiny ny minitra ny lahatsary mijery ny hahazo maimaim-poana an-tariby maro.
Hafatra tsy misy fetra eo ny halavan’ny lahatsoratra
Nandritra ny fotoana ianao dia ho afaka ny handefa hafatra an-tsoratra maimaim-POANA ny ETAZONIA amin’ny finday isa»Live Chat».
Manomboka ny fifandraisana dia tena mora: ny indray mipi-maso ny fidirana, ny fampiasana ny Facebook kaonty na misoratra anarana fotsiny ny fampiasana ny adiresy mailaka sy mahazo maimaim-poana ny vondrona antso sy ny vondrona video antso ara-potoana avy amin’ny IPhone, IPad na IPod.
Inona no endri-javatra ny»Live Chat».
Ny endri-javatra tsy manam-paharoa io fampiharana dia ahitana lahatsary-antso, ny feo miantso, vondrona antso, ny vondrona video antso sy ny vondrona chats, hafatra SMS ary tena finday isa, ary koa ny fifanarahana miaraka amin’ny navigateur. Manohana voalohany indrindra ny vondrona video antso sy mandray anjara amin’ny fampandrosoana bebe kokoa ny hafatra fahaiza-manao isan-karazany mampiasa ny endri-javatra ny haino aman-jery hafatra.
Nahoana no tena mora.
«Ny lahatsary amin’ny Chat efi-trano»dia manome fahafahana ho an’ny antso ho namana efa misy IPhone fifandraisana, Facebook sy ny mailaka, sy ny Internet, ary koa ny adiresy boky, Outlook sy ny IPhone.
Afaka ho vondrona ny antso sy ny vondrona video antso maimaim-POANA nandritra ny fitaovana
Lahatsary fifandraisana tsy misy jereo →